Izinhlamvu zemali eziyimfihlo eziyi-10 ezingcono kakhulu nokuthi ungazithenga kanjani - i-Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Izinhlamvu zemali zobumfihlo ezingcono kakhulu eziyi-10 nokuthi ungazithenga kanjani
Tag: Binance, I-Monero, I-Oasis Network, Inethiwekhi yePhala, ukheshi lwemfihlo, secret, I-Zcash
Le ukheshi lwemfihlo ama-cryptocurrencies angafihla noma afihle okwenziwayo ku-blockchain ukuze kugcinwe amazinga aphezulu obumfihlo nokungaziwa.
Indlela yabo ye-cryptographic ethuthukisiwe iyona eyenza izinhlamvu zemali zobumfihlo zihluke kwezinye i-cryptocurrencies njenge-Bitcoin nezinye izinhlamvu zemali ze-Alt. Ingabe kunengqondo ukuba nobumfihlo obuphelele kanye nokungaziwa okuphelele ekuhwebeni kwe-crypto? Uma kunengqondo, kulapho "izinhlamvu zemali zobumfihlo" ziqala ukusebenza khona.
Izimali ezifihlekile ezivamile aziyimfihlo ngokuphelele, njengoba ukuthengiselana konke kuku-blockchain, ku-publicledger, futhi kuvuleleke kunoma ubani. Nakuba isistimu enjalo inikeza izinzuzo ezimbalwa, ayinikezi abasebenzisi ubumfihlo obuphelele nokungaziwa, okwenza kube lula ukuxhumanisa ubuwena ekhelini lothile.
Izinhlamvu zemali zobumfihlo azihlukile kakhulu ku-bitcoin noma amanye ama-altcoins. Bafihla amakheli e-wallet kanye nemininingwane engacacile engase isetshenziselwe ukukhomba umnikazi wesikhwama.
Kulesi sihloko, sizongena sijule ngokuthi ziyini izinhlamvu zemali zobumfihlo, ukuthi zisebenza kanjani, nokuthi ungazifaka kanjani esikhwameni sakho nge-Binance.
Ziyini izinhlamvu zemali zobumfihlo?
Yiziphi izinqubo ze-cryptographic ezisetshenziswa izinhlamvu zemali zobumfihlo?
Ingabe izinhlamvu zemali zobumfihlo azilandeleki ngempela?
Izinhlamvu zemali ezinhle kakhulu zobumfihlo ku-Binance
Izinhlamvu zemali zobumfihlo ziyikilasi le-cryptocurrencies elakhelwe phezu kwezimiso ezimbili eziyinhloko: ukungaziwa nokungalandeleki.
Zisebenza kanjani izinhlamvu zemali zobumfihlo?
Njengamanye ama-cryptocurrencies, izinhlamvu zemali zobumfihlo nazo zisebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain njengeleja esabalalisiwe. Nakuba ukuthengiselana ngama-cryptocurrensets ahlukahlukene kuvame ukuba sesidlangalaleni, izinhlamvu zemali zobumfihlo ziklanywa ngendlela eyenza kube nzima kakhulu (noma kungenzeki) ukuxhumanisa okwenziwayo. Akwenzeki ukucacisa umthombo noma lapho izimali zifike khona.
Okuhlukanisa izinhlamvu zemali zobumfihlo kuma-cryptocurrensets ajwayelekile ukuthi zisebenzisa i-cryptography ukufihla ibhalansi yesikhwama somsebenzisi nekheli ukuze kugcinwe ukungaziwa nokungalandeleki.
Ngizama ukusho amasu ama-cryptographic amane asetshenziswa ezinye zezimali eziyimfihlo ukugcina ulwazi luyimfihlo.
Amakheli ayimfihlo (Amakheli ayimfihlo): Umsebenzi ngamunye ukhiqiza ikheli elisha ukuze kuvikelwe ubumfihlo bomamukeli. Lokhu kuqinisekisa ukuthi abantu bangaphandle abakwazi ukuxhumanisa noma yiziphi izinkokhelo ekhelini lakho lesikhwama.
CoinJoyina: Isebenza njengengxube yezinhlamvu zemali ehlanganisa ukuthengiselana kwabantu abambalwa kube inkokhelo eyodwa. Bese, inkampani yangaphandle empeleni ihlukanisa inani elifanele lezinhlamvu zemali bese izithumela kubamukeli. Umamukeli ngamunye uthola izinhlamvu zemali ekhelini elisha ukuze kuncishiswe ukulandeleka.
I-Zk-SNARKs: Zk-SNARKs, isifinyezo sokuthi I-zero-knowledge impikiswano yolwazi engahlangani, ikuvumela ukuthi ufakazele ukuthi okwenziwayo kuvumelekile ngaphandle kokwabelana ngemininingwane yakho (umthumeli, umamukeli, inani).
Amasiginesha akhang: Uma usayina umsebenzi ngokhiye oyimfihlo, abanye bangaxhuma isiginesha yakho nekheli lakho. Amasignesha amandandatho avimbela lokhu ukuthi kungenzeki.
Njengoba kunamasiginesha amaningana kumsebenzi ofanayo, kuba nzima kakhulu kwabanye ukuxhumanisa isiginesha yakho nekheli lakho.
Lokhu kuncike ekwakhiweni nasekuhleleni kohlamvu lwemali lwangasese ngalunye, njengoba ezinye zilandeleka kakhulu kunezinye ... futhi akuzona zonke eziyimfihlo njengoba zisho. Amaphrothokholi aklanywe kabi angase aqukathe amaphutha angenza ukuthengiselana kwawo kulandeleke. Kodwa-ke, uma kucatshangelwa izindlela zamanje zokubethela nezindlela zokubethela, izinhlamvu zemali zobumfihlo zisebenza kahle. Qaphela njalo: Ngokuthuthukiswa kwamathuluzi amasha okuhlaziya, amakhompuyutha ngelinye ilanga angaba namandla ngokwanele ukuze aqhekeze izindlela zesimanje zokubethela.
Izinhlamvu zemali zobumfihlo zinhle kakhulu kulabo abafuna ubumfihlo beqiniso bezezimali. Ngezansi ngibale izinhlamvu zemali zobumfihlo ezingcono kakhulu ongacabanga ukuzingeza esikhwameni sakho se-cryptocurrency (* izintengo namakepisi wemakethe kusukela ngo-April 2022):
I-Monero (XMR) ngentengo engu-$217,50 kanye nenani lemakethe elingu-$3.936,97M.
I-Oasis Network (i-ROSE), ngentengo engu-$ 0,27 kanye nemakethe yemakethe engu-$ 927,01M *.
Ikhanseliwe (DCR), ngentengo engu-$ 62.50 kanye nenani lemakethe lika-$ 868.52M *.
secret (SCRT), ngentengo engu-$5.37 kanye nenani lemakethe elingu-$876.89M
I-Horizen (ZEN), ngentengo engu-$ 48.18 kanye nenani lemakethe lika-$ 589.19M *.
I-Verge (XVG), ngentengo engu-$ 0,013 kanye nenani lemakethe lika-$ 218,47M *.
I-Network Dusk (DUSK), ngentengo engu-$0.50 kanye nenani lemakethe lika-$ 201.48M *.
Inethiwekhi yePhala (PHA), ngentengo engu-$0.29 kanye nenani lemakethe elingu-$79.20M *.
ugongolo (BEAM), ngentengo engu-$ 0.38 kanye nenani lemakethe lika-$ 42.54M *.
Njengoba i-Bitcoin namanye ama-cryptocurrencies amaningi esebenza kunethiwekhi ehlukaniselwe amazwe, angahlinzeka ngezinga elithile lobumfihlo. Isibonelo, ukuvumela abasebenzisi ukuthi bakhe ama-wallet ngaphandle kokudalula ubunikazi babo. Kodwa-ke, akuzona eziyimfihlo ngokuphelele ngoba ukuthengiselana kuqoshwa ku-blockchain. Kanjalo, izinhlamvu zemali zobumfihlo zingaba inketho yalabo abafuna amazinga aphezulu wokungaziwa kanye nobumfihlo.
Sekushiwo lokho, khumbula ku-DYOR ngaphambi kokuthenga nokuzibophezela kunoma yiziphi izinhlamvu zemali zobumfihlo.
Isihloko sangaphambiliniUkunikezwa kwebhola: ukushintshanisa i-fiat nokwabelana. Umklomelo wePhuli: 50.000 BUSD ngeBinance
Isihloko esilandelayoAmamethrikhi okufanele acatshangelwe ukuthenga nokuthengisa ama-NFT
I-Binance Coin (BNB): Ithokheni lendabuko lokushintshaniswa okukhulu kakhulu kwe-crypto emhlabeni
Yiluphi uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuthenga ama-cryptocurrensets?